फिनल्याण्डका नागरिक विश्वकै सबैभन्दा धेरै खुशी ! « Drishti News – Nepalese News Portal
फिनल्याण्डका नागरिक विश्वकै सबैभन्दा धेरै खुशी !
७ चैत्र २०७७, शनिबार 1:16 pm
हेल्सीन्की । फिनल्याण्डका नागरिक विश्वकै सवैभन्दा धेरै खुशी रहेको पाइएको छ । खुशी नागरिकहरुको मुलुकको सूचीमा फिनल्याण्ड अहिले लगातार चौथोपटक सबैभन्दा अगाडि परेको हो ।
सूचीमा रहेका अघिल्ला दश देश मध्ये न्युज ल्याण्डबाहेक अरु सवै युरोपेली मुलुक रहेका छन् । न्युजल्याड नवौँ क्रममा रहेको छ । सूचीमा अमेरिका १४औँ क्रममा रहेको छ भने बेलायत १८औँ नम्मरमा परेको छ । जर्मनीले भने पहिलाभन्दा धेरै सुधार गरेको देखिएको छ । यसअघि १७औँ नम्बरमा रहेको जर्मनी यसपटक सातौ क्रममा परेको छ ।